Junta de Andalucía: kuzvipira kutsva kumalaptop naGuadalinex Edu | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, GNU/Linux, Misangano / Zviitiko / Hurukuro, Noticias, Resources
Bazi redzidzo neMitambo ye Andalusian Board iri kubheja zvakanyanya padzidzo yedhijitari nekuda kwedenda. Neichi chikonzero, nekuraira kweGeneral Directorate Yevadzidzisi Kudzidziswa uye Yekudzidzisa Kugadziridza, iri kuzowana nhamba hombe yemalaptop ine iyo GNU / Linux Guadalines Edu kugovera.
Kunyangwe iyo Guadalinex vhezheni kumhuri yakamira, chirongwa cheEdu chakange chichiri kupisa zvakanyanya. Muchokwadi, iyo vhezheni itsva inotarisirwa kuburitswa mumwedzi mishoma. Guadalinex Edu 20.04 (Magamba), Inogona kugadziridzwa neizvi zvese zvishandiso zveruzhinji zveAndalusian.
Kubudikidza Kubvumirana Pakati Dare richaona sisitimu hombe yemidziyo yemakirasi. Pfungwa iyi ndeyekuti vadzidzi vese vanogona kuve nemidziyo yavo kana vasungwa vanogona kudzivirira kudzidza kumeso. Uye kune izvi, katalog yemidziyo yakatenderwa yekushandisa yakagadzirirwa, nekuti haizotengwa kubva kumutengesi mumwe chete, asi pachave nemanyowani masosi.
Mune chibvumirano cheDare Rinodzora raChikunguru 28, chikumbiro chakapihwa chekutenga 70.000 diyuniti, ine kukosha kwemamiriyoni makumi mana nemashanu euros. Zvinotaridza kuti kondirakiti iyi inongosanganisira angangoita zviuru makumi manomwe nezvinomwe pari zvino, kunyangwe hazvo zvakaziviswa kuti paizosvika macomputer anosvika zana nemakumi mashanu. Zvichida kuti vamwe vese vaizouya gare gare nemakwikwi matsva kana kana izvozvi zvaizokwana.
Ese mapoka aya ane maficha emahara maficha, na:
15 ″ chidzitiro
240GB kana SSD yakakura
Vatengesi / Mhando / Muenzaniso (ese akatemerwa mutengo pakati pe € 300-400 approx.):
Informaticamunicaciones SL Project Management - Acer - Mufambi P215-52
HP Kudhinda Uye Komputa Mhinduro - HP - ProBook 455
Kana ari operating systemSezvandataura, vaizouya naGuadalinex Edu, pamwe vhezheni 16.04 kana vhezheni 20.04 mukuvandudza.
Zuva rinotarisirwa zvikwata izvi kusvika mumakirasi raizove pakati pekutanga kwa Gunyana naGumiguru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Junta de Andalucía: kuzvipira kutsva kumalaptop naGuadalinex Edu
Kodzero inodya vanhu haiwanzo kuva nemafungire akaita seaya. Chero zvazviri gamuchirai.
Ini handinzwisise kuti mimwe michina yakakosha sei € 300-400 uye huwandu hwacho i45.000.000 yakakamurwa ne71.000 = Yakaenzana ne633, iri Linux yemahara uye malaptop asingade chero kumwe kugadziriswa, kupfuura kungoita pfupi, iyo inogona kuitwa vadzidzi vamwe chete… vari kurasika pakati pe € 250-330 munzira, iyo ye71.000 inosvika ku17.000.000, hapana kana chinhu, ivo vari kutotinyengedza zvakare.
Mushure memavhiki matatu ekushandisa:
- Handina chekutaura nezve Hardware ndiro + processor + diski. I3 ine 8 GB ye RAM uye 100 GB SSD yakawanda yehofisi otomatiki uye zvatiri kuzoda (zvakanyanya, webhu bhurawuza uye inopfuura 90% yevashandi vekudzidzisa).
- Ivo vasvika kwatiri vanobva kukambani yeSpanish (TTL), iwo macomputer eChinese (Chinese, ndoda) ane mhando inotyisa yezvinhu. Kunyangwe kuve kwevadzidzisi uye uchifungidzira kurapwa kwakaperera, panopera kosi kunenge kuchirwadza. Mapurasitiki anotyisa; hinji, kutya.
- Iyo nhanho yekuchengeteka inochema: isu takagadzirwa kusaina gwaro ratinovimbisa kusaisa imwe software, saka isu tinofanirwa kushandisa iyo linux distro inouya nekumira. Zvinoratidzika sezvakarurama. Asi, murume, zvirinani kuendesa imwe yakati kurei yakabwinyiswa distro. Iyo mania yekuburitsa kumakambani vanoziva zvavanoita ... pachinzvimbo chekudhonza yakatobatanidzwa distro (saUbunto, Debian, Manjaro, ini handizive) ivo vanoomerera pakupa zita reUbuntu uye kuivhara. Zvinonzwika zvakanaka kwandiri, asi zvirinani ipa Laptop nechikamu icho mushandisi data rinoenda ENCRYPTED uye pamwe nemukana wekuCHINJA KUSHANDISA PASSWORD. Vanouya ne "mushandisi-mushandisi", saka HATINOGONESE KUSIYA PAMWE MAFILEI KANA PASI PASWORDI RICHANGOONZWA PAPA LAPTOP. Izvi zvinoita kuti zvisagone kushandiswa: Ini ndinofanira kuisa zita rangu rekushandisa reSeneca nephasiwedi mazana mana pazuva, kuwedzera kuClassroom neMoodle. Uye dhonza gore kana pendende yekutakura uye nekuunza data.
Fomati uye isa W10. Zvimwe izvo kana 75.000 malaptop kudura. Kana kubhadhara € 100 rezinesi reWindows kuchiratidzika kunge marara, zvinonyanya kupambadza kushandisa malaptop makumi manomwe nemashanu semapepa ehuremu, mamwe mapepa anodhura kwazvo. Ini ndinofungidzira kuti hapana kambani yakazvimiririra yaizotambisa mari nenzira iyoyo uye kusarudza W75000. Yakachipa inodhura.